ဘုန်းကျော်: Jun 4, 2011
ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ပင်မငါးမွေးမြူရေးစခန်းတွင် နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကြာ ရေစက်မောင်းပြီး ငါးဖမ်းသမားလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျနော့်အဖေတပ်ကြပ်ကြပ်ကြီးအား ယခုသီချင်းဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်ပါသည်။ အဖေဟာ ကျနော်တို့ မောင်နှစ်မ လေးယောက်ကို တံငါသည်လုပ်ပြီး ကျွေးခဲ့ပါတယ်။ နေပူမရှောင် မိုးရွာမရှောင် ရေစက်မောင်းခဲ့ရတယ်။ ယနေ့မှာတော့ ကျနော့်ကိုချစ်တဲ့ ကျနော့်အဖေ...ကျနော်နေခဲ့ဘူးတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းလေးတစ်ခုမှာ မုန့်ဟင်းခါးရောင်းပြီး ဘ၀ကို ရိုးရိုးသားသားနဲ့ဖြတ်သန်းနေပါတယ်။ အဖေကြီးကျန်းမာပါစေ။
ဇွန်လ(၁၉) ရက်နေ့တွင်ကြရောက်မည့် အဖေများနေ့အတွက် တေးလက်ဆောင်အဖြစ် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်ပြောပြချင်တာက NLD-LA မလေးရှားဌာနခွဲ စ,ထောင်တုန်းကစပြီးဒီနေ့ အထိပေါ့။
အခုအဲဒိ သူခိုး ဥက္ကဌ ကျော်ကျော်ကိုသူတို့ ဖြုတ်လိုက်ပြီ။ အမှန်ဆို အားလုံးနီးပါးသူခိုးတွေ။ ဘာဖြစ်လို့ဖြုတ်တာလဲဆိုတော့ သူ့ကို လူတွေလက်မခံတော့ဘူး။
ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်။ ၂၀၀၆-ခုနှစ်ကပေါ့။ ကျော်ကျော်တို့အခု Burmese Refugee Organization (BRO) ဥက္ကဌ မောင်လှတို့ ထောင်ထဲမှာ UN လိုချင်လို့သံရုံးအရှေ့ မှာဆန္ဒပြတာထောင်ကျကုန်တယ်။ အဲဒိတုန်းကဘာအဖွဲ့ မှမရှိဘူး။
ကျနော် ကစားသောက်ဆိုင်တခုမှာပန်ကန်ဆေးနေတယ်။ ကျနော်က US သွားခါနီးပေါ့။ ဆိုလိုတာက UN ကဒ် ရထားတာပေါ့။ အဲဒိအချိန်မှာပဲ ဇော်မျိူးလွင်ဆိုတဲ့ လူတယောက် ဆန္ဒပြရာကနေ ထောင်ကျပြီးပြန်လွတ်လာတယ်။ သူအပြင်ရောက်လာတော့ နေစရာမရှိလို့ ကျနော့် အခန်းမှာလူတယောက်အကူအညီနဲ့ လာနေတယ်။ နောက်တော.သူကနိုင်ငံရေးသမားဆိုပြီး ဇာတ်လမ်းကစတယ်။ ကျနော်လည်း မွန်ပြည်သစ်က စစ်သားဟောင်းတယောက်ပဲ။
စကားပြောကြရင်းနဲ့ သူကမလေးရှားမှာ အဖွဲ့ တခုထောင်ချင်တယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ငွေမရှိဘူးတဲ့
ကျနော့်မှာရင်းဂစ်ငွေ၂၀၀၀-ကျော် ရှိတယ်။ အဲဒီကစပြီး BRO ဆိုပြီး စ,ထောင်တယ်။ အရင်ဆုံးစကြတာ ၄-ယောက်ပေါ့။ သော်ဇင်က အခုတော့မြန်မာမြန်မာပြည်ကို ပြန်သွားပြီ။ နောက်တယောက်က ထွန်းထွန်းနိုင်။
အခုအမေရိကားမှာ။ ကျနော် နဲ့ ဇော်မျိူးလွင်။ ကျနော်တို့ ရုံးခန်းလေး တခုလုပ်တယ်။ အခန်းတခန်းငှါးလိုက်တယ်။ နောက်တော့ ဇော်မျိူးလွင်က ကျော်ကျော်တို.အုပ်စုတွေထောင်ကထွက်လာဖို့အတွက် တရားရုံးတွေ ယူအန်တွေကို ချည်းကပ်တယ်။
အဲဒိကစပြီး လူတွေ မန်ဘာတွေ များလာတယ်။
၂-လလောက်ကြာတော့ ယူအန်ကနေတဆင့် ထုတ်ပေးတာ ကျော်ကျော်တို့ အဖွဲ့ တွေထောင်ထဲက ထွက်လာကြတယ်။ အဲဒိကနေတဆင့် မလေးရှား NLD-LA ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းတယ်။
အဲဒိမှာ ပွဲတပွဲလုပ်တော့ နယ်စပ်က ဦးလှဦးလာတယ်။ အဲဒီအချိန်ထိကျနော် တယောက်တည်း လစဉ်ထောက်ပံ့နေတာ။ သူတို့ ဘယ်သူမှအလုပ်မလုပ်ကြဘူး။ ကျနော် တယောက်ပဲအလုပ်လုပ်တာ။
နယ်စပ်က သူခိုး ဒေါက်တာနိုင်အောင်၊ မိုးသီးဇွန်အဆုံး၊ အမတ်တွေလည်း မလေးရှားကိုခြေစိပ်လာတယ်
အခုသြစတေးလျှရောက်နေတဲ့ အဆိုတော်ဘာဘူတို့အဖေဒေါက်တာလှိူင်မြင့် လည်းပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းသွားသေးတယ်။ ရုံးပေါ်မှာဖာရုံလိုပဲ။ နောက်ပိုင်းကျနော် လည်းရှက်ပြီးပါတီမှာမနေတော့ဘူး။
No one is perfect. Everyone makes mistakes. အင်္ဂလိပ်စကားမှာတောင် ဘယ်သူကမှ အမှားနဲ့မကင်းဘူး။ လူတိုင်း အမှားလုပ်တယ်ဆိုပြီးရှိတယ်။ သူတို့တွေတောင် အမှားလုပ်ခဲ့တာကို ၀န်ခံတယ်။ သြစတျေးလျနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်တွေ စတင်ပြီး ကိုလိုနီလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကို လက်ရှိ လေဘာအစိုးရလက်ထက်မှာ ၀န်ချ တောင်းပန်တယ်။ ၀န်ကြီးချုပ် ကယ်ဗင် (လက်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး) က ပါလီမန်ထဲမှာ အသံဆို့ နင့်နင့်နဲ့ Sorry ဆိုတဲ့စကားကို ပြောခဲ့တယ်။
သူတို့ဘယ်လိုအမှားတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ မြန်မာလိုဆိုရင် မျောက်ကုလားလို့ခေါ်တဲ့ Aborigines (ဌာနေတိုင်းရင်းသား) ခလေးငယ်တွေကို သူတို့မိဘတွေလက်ထဲကနေ အတင်းလုယူပြီး ပညာသင်ပေး၊ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တာနဲ့ပက်သက်ပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကို ၀န်ချတောင်းပန်တယ်။ ဒါကိုကြားရတော့ တယ်ခံခဲ့ရတဲ့ လူတွေခင်ဗျာ...မျက်ရည်တောင်ကျရရှာတယ်။ ဒါကို TV ကနေ ကျနော်တွေ့ တော့ ဒီလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ သြော်...ငါတို့တိုင်းပြည်က နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဟု ခေါ်ဆိုသော အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီးသော လူအိုကြီးတွေကများ ကျနော်တို့ မှားခဲ့ပါတယ်လို့ ပြည်သူတွေကို ၀န်ချတောင်းပန်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲလို့ ခံစားမိတယ်။
သူတို့အပြင် အတိုက်အခံဟုခေါ်သော တိုင်ပတ်ပြေးနေတဲ့ အလုပ်မရှိအကိုင်မရှိ နိုင်ငံရေးသမား ကြောင်တောင်တောင်ကြီးတွေဆီကလည်း သူတို့လည်း မှားပါတယ်လို့ ပြောရင် ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းမလဲပေါ့။
နောက်ပြီး ပြောစရာကျန်ပါသေးတယ်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သုံးယောက်ပေါင်းလေးတန်းလောက်တောင် မအောင်ပဲနဲ့ ခေါင်းဆောင်လုပ်နေကြတယ်။ အားလုံးမဟုတ်ပါ။ သူတို့လည်း မှားခဲ့ပါတယ်လို့ ပြည်သူကို ၀န်ချတောင်းပန်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ ကျနော်တွေးမိနေတာပါ။
ကျနော်ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးလေသံကောင်ကလည်း တပြားမရှိ တပြားမလျှာ့တဲ့လေသံဆိုတော့ နဲနဲတော့ နာမှာပေါ့။ စိတ်မဆိုးကြပါလေနဲ့။ ဆက်ပြီး တွေးမိ ထိမိတာတွေကို တင်ပြပါရစေ။ ဒီလိုပါ။
တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်က လူကြီးပြီး ဟိုဟာမကြီးတဲ့လူတွေ ဘယ်နှစ်ခါများ သူတို့မှားပါတယ်လို့ပြောခဲ့လဲ။ တရားဝင် လူသိရှင်သိ ပြောခဲ့တာကို တွေ့မိလဲ။ ဒါဆိုရင် သူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးက မှန်ခဲ့တာပေါ့လေ။ ကဲ...ထားပါတော့။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ဘယ်နှစ်ခါမှား သူတို့မှားခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့လဲ။ သူလုပ်ခဲ့တာတွေဟာ အမှန်တွေချည်းပဲလား။ ကျနော်က ဒီလိုပြောချင်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD လုံးဝအမှားကြီး တစ်ခုကို လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကတော့ ၉၀-ခုနှစ်မှာ "နိုင်"ရဲ့ သားနဲ့ စောက်ဖြစ်မရှိ/အာဏာမယူနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါက လုံးဝ မဟာအမှားကြီးပဲ။ ထပ်ပြီးမှားတာက နှစ်ပေါင်း ၂၀-ကျော်တဲ့အထိ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းအောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့တာပဲ။ ဒါနဲ့ပက်သက်ပြီး ပြည်သူတွေကို လုံးဝ တောင်းပန်သင့်တယ်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို ကြည့်ပါအုံး။ သူတို့လည်း အမှားလုပ်ခဲ့တာကို မတောင်းပန်ခဲ့ဘူး။ ဒီအမှားကတော့ သူတို့ကြောင့် ရွာသူရွာသားတွေ တိုးတက်မှု နှောင့်နှေးခဲ့တယ်။ သေခဲ့တယ်။ လူမွှေးသူမွှေး မပြောင်ခဲ့ဘူး။ ပြည်သူတွေကပဲ သူတို့ကို ကျွေးခဲ့ရတယ်။ ပေးခဲ့ရတယ်။ သူတို့ ပြည်သူတွေကို ဘာများပြန်ပေးခဲ့လဲ။ ကျနော်တို့ စစ်ကြောင်းသွားတုန်းက ရွာသားတွေဆီက ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား တောင်းစားခဲ့ရတယ်။ ကြက်, ပေးပါအုံးလို့ တောင်းခဲ့တယ်။ အိမ်က ပိန်လိန်နေတဲ့ ခွေးကိုလည်း အေကေ ၄၇ နဲ့ ပစ်ပြီး တောင်းစားခဲ့ဘူးတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် သူအိမ်က ခွေးကို သူ့အိမ်က စပါးလင်နဲ့ပဲ ချက်စားခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ပြန်ပေးနိုင်တာက လေ,ပဲရှိတယ်။ တခါတလေ ပါရာစီတမောလေး ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးပြောရရင်တော့ ကျနော်တို့သူပုန်ကို ရွာသားတွေက ကျွေးရတာပဲ။ ဆိုတော့ဗျာ...တိုင်းရင်းလက်နက်ကိုင် သူပုန်တွေအားလုံးဟာ အမှား တစ်ခုခုတော့ လုပ်ခဲ့မိတယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့ တောင်းပန်သင့်တယ်။ ကိုယ်မှားခဲ့တာကို ပြောသင့်တယ်။ အခုတော့ တချိန်လုံး မသိချင်ယောင်ဆောင်နေသလားလို့ ခံစားမိတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေး လ လောက်က ခလေးသုံးယောက်နဲ့ ကျနော် ဘန်ကောက်ကိုရောက်တယ်။ တခေါင်းလုံးဖြူဖွေးနေတာတောင် လူငယ်စိတ်မကုန်သေးတဲ့ ကိုဇော်မင်းအိမ်ကို အလည်သွားခဲ့တယ်။ ညပိုင်းဆိုတော့ သောက်ပွဲပေါ့။ ဒီပွဲမှာ နာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်နဲနေတဲ့ လူတစ်စုနဲ့ ဆုံတယ်ပေါ့။ ဒေါက်တာဇာနည်၊ RFA သတင်းထောက်၊ VOA သတင်းထောက်၊ ကိုဇော်မင်း၊ ကိုအောင်သူငြိမ်း၊ ကျနော်တို့မိသားစု၊ ကိုဇော်မင်းရဲ့ ဘေဘီတို့နဲ့ သောက်ပြီး ပွားကြတာပေါ့။
ကျနော်ကအရက်ဆိုရင်ပြီးရော ဘာအရက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အလကားရရင် အကုန်သောက်တယ်။ ကိုဇော်မင်းပဲတိုက်ပါတယ်။ ၀ါးတီးတွေကလည်း အစုံပဲ။ ၀ိုင်းက အရှိန်ရပြီဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းပြီးလွှတ်ကြပီ။ ကျနော်က ဒေါက်တာဇာနည်ကို သိပ်ပြီးမကြည်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် "ထ" ပြီးထိုးချင်နေတာ လက်ကိုယားနေတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူကြီးလူကောင်းတွေစုံတဲ့ဝိုင်းဆိုတော့ ကိုယ်လို လူမိုက်က အေးအေးနေပေးရတယ်။ ဟန်ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်။ အရပ်က သစ်ကုလားအုပ်လို၊ အသားအရည်က မန္တလေးသားပီပီ ကျောက်မီးသွေးလိုရှိတဲ့ ဒေါက်တာဇာနည်က ထုံးစံအတိုင်း စွပ်ပြီးပွားတာပေါ့။ တခါတလေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က "ကလပ်" တယ်။ ပဲ များတယ်ပေါ့။ ကြာပစ်တာလည်း ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးသူက ဝေဖန်တော့ ကျနော်အတော်တင်းတယ်။ နောက်မှ စဉ်းစားမိတော့ ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လည်းပေါ့။ ထားတော့။ ကျနော်ပြောချင်တာက ဒေါက်တာဇာနည်ရဲ့ ဟန်ဆောင်မှုးကင်းတဲ့အသွင်အပြင်၊ ရိုးရိုးသားသား သူမြင်တာကို သူစွပ်ပြီးပွားတဲ့အကျင့်...ဒါကိုသဘောကြလို့။ ပညာတက် ရုပ်မချော ဥစ္စာမပေါတဲ့ လူ။ ဒီလူက တချိန်တုန်းက နာမည်ကြီးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီး ပေါက်,ခဲ့တဲ့လူ(အီးပေါက်တာမဟုတ်)။ သူ...စစ်အစိုးရနဲ့ ရမလားဆိုပြီး ပေါင်းခဲ့တဲ့လူ။
ဒီလူက သူမှားခဲ့ပါတယ်လို့ အရက်ဝိုင်းမှာ ပြောခဲ့တယ်။ ဒါကို သဘောကြခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး ကိုအောင်သူငြိမ်းတို့ ဗဟုအဖွဲ့။ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ ပညာမရှင်တရှင်တွေ။ သူလည်းပဲ မှားခဲ့ပါတယ်လို့ ၀န်ခံခဲ့တယ်။
ကျနော်တို့ ဗမာလူမျိုးတွေဟာ မှားခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောသင့်တယ်။ တောင်းပန်သင့်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူအတော်များများဟာ ကိုယ်မှားခဲ့တာကို မှန်တယ်ဆိုတာချည်းပဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ယဉ်ကျေးမှုလားမသိ။ နောက်ဆုံးနိဂုံးချုပ်မိတာက ကျနော်တို့ လူမျိုးဟာ မှားပါတယ်လို့ပြောရမှာ ကြောက်တဲ့လူစားမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။